शेरधन पत्नि भन्छिन् “मेरा श्रीमान् गलत भए कठघरामा उभ्याउन तयार छु” - हाम्रो देश
प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईलाई हिजो एमालेको नयाँ भवनमा बालिका खड्काले अपशव्द प्रयोग गरेपछि त्यसको प्रतिउत्तरमा मुख्यमन्त्रीको श्रीमती जाङ्मु इन शेर्पाले लामो शव्द खर्च गरेकी छिन्।
बिहीबार बालिका खड्काले मुख्यमन्त्री शेरधन राईलाई समाजले पचाउनै नसक्दै शव्दहरु प्रयोग गर्दै गाली गरेको भिडिओ केही सञ्चारमाध्यमबाट सार्वजनिक भएको थियो । उक्त भिडि‌ओ सार्वजनिक भएपछि जाङ्मुले सामाजिक सञ्जाल र युट्युवमा भाइरल बनाइएको घटना र विषयले आफ्नो गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको बताएकी छिन् ।
उनी लेख्छिन् “मेरो श्रीमान बिरुद्व बिगत लामो समय देखि चरित्र हत्या मात्र होइन, वहाँको ब्यक्तिगत र राजनैतिक जीवन समाप्त गर्ने सुनियोजीत षड्यन्त्र हुदै आएको कुरामा म राम्रो जानकार छु ! म पनि एउटा सचेत महिला हुँ, न्याय अन्याय सबै कुरा बुझ्छु त्यतिमात्र होइन, अन्यायको बिरुद्व बोल्ने र लडने सामाजिक सेवा कर्मी पनि हुँ ! तर बिना प्रमाण, बिना गल्ति र दोष बिना एउटा महिलाको नाममा यो हद सम्मका महिलाहरु पनि हुँदा रहेछन भन्ने आम महिलालाई कलंकित पार्ने जुन हर्कत एकजना महिलाले गर्दै आएकी छिन यो ज्यादै नै दुखद छ !”
जाङ्मुले आफ्नो श्रीमानले पीडीत बनाएको एउटा सानो मात्रै प्रमाण भए पनि श्रीमान्लाई कारवाहीको लागि कानूनी कठघरामा उभ्याउन आफू तयार गरेको बताएकी छिन् । उनले केही कागजातका तस्विरहरु पनि राखेकी छिन् । एक तस्विरमा बालिका खड्काले हस्ताक्षर गरेको देखिन्छ । २०७७ साल असोज ६ गतेको उक्त कागजातमा लेखिएको छ ।
बिहीबार बालिका खड्काले व्यवहार देखेर केही व्यक्तिहरु उनी मानसिक रोगी भएको हुनसक्ने बताउँछन् । एकजना महिला यसरी पटक पटक किन आक्रोशित हुन्छिन् । वास्तविकता के हो यसबारे सत्यतथ्य कारवाही गर्नुपर्ने उनीहरुको माग छ ।
राप्रपाका नेता मोहन श्रेष्ठ भन्छन् “राजनीतिकर्मी बालिका खड्का मानसिक रुपमा ठिक छैनन् भने उनको उपचारको व्यवस्था हुनुपर्छ, मानसिक रुपमा ठिक छिन् भने उनले लगाएको आरोपको छानबिन हुनैपर्छ । दोषी ठहरिए आरोपित शेरधर राइमाथि कारबाही हुनुपर्छ । सत्ताको आडमा पीडित महिला यसरी सडकमा रुँदै हिड्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुनैपर्छ ।”